Lena indawo ka-Laurindinha - I-Airbnb
Lena indawo ka-Laurindinha
Ponte de Lima, Viana do Castelo, i-Portugal
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Telma
U-Telma Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elithokomele elinokukhanya kwemvelo okuningi. Itholakala enhliziyweni yedolobhana, eduze nezitolo, izindawo zokungcebeleka, iminyuziyamu, umfula i-Lima kanye ne-Igreja Matriz. Buka i-Clock Tower ye-Igreja Matriz.
Indlu iqukethe isitezi sesi-2 nesesi-3 sendlu yamatshe, eyatholwa eminyakeni embalwa edlule futhi isanda kulungiswa kabusha. Anamakamelo okulala angu-2, elilodwa elinombhede ophindwe kabili kanye negumbi elincane lokulala elinemibhede emibili elayishwayo eyodwa. Igumbi lokulala elinombhede ophindwe kabili lifakwe iyunithi yomoya futhi igumbi lokugezela lifakwe i-heater. Kukhona i-crib endlini yezingane ezineminyaka engu-3 ubudala.
Ikhishi lincane (ikhishi) futhi lifakwe i-gas hob, ifriji, umshini wekhofi kanye ne-microwave futhi lisezingeni lesi-2, lapho kukhona futhi igumbi lokuhlala / lokudlela eline-cable TV kanye ne-air conditioning.
Ukufinyelela ezitezi ezahlukene ngezitezi.
4.83 · 76 okushiwo abanye
I-Casa da Laurindinha itholakala emgwaqeni wezitolo wendawo, lapho ungathola khona isitolo segrosa, ikhemisi, izitolo zezikhumbuzo, imisebenzi yezandla, indawo yokubhaka nekhofi. :) omakhelwane banobungane kakhulu futhi bayatholakala. Asondele kakhulu endaweni yamabha nezindawo zokudlela.
UTelma Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 83608/AL
Hlola ezinye izinketho ezise- Ponte de Lima namaphethelo